Semalt Inotsanangura WordPress Plugins Iwe Unoda Kuwedzera Nzvimbo Yenyu YepaIndaneti
Plugin mu WordPress iyi software ine mabasa akasiyana siyana anoshandiswa kuwedzera WordPress website. Wordpress Plugins inogona kuwedzera zvitsva kana kuwedzera kushanda kune webhusaiti. Vanogonawo kugadzikana kune mamwe mazita eWebsite WordPress akadai se blog, nzvimbo yega yega kana Woo Commerce website - team logo designer. Zvisinei, haisi mapurundi ose anobatsira uye anofanirwa kuisa pa WordPress website yako.
Ryan Johnson, nyanzvi inotungamirira Semalt , inotsanangura apa mamwe emapulamu anokosha kuti iwe uafunge.
Ndiyo caching WordPress plugin iyo inogona kugadziriswa nekunyoresa kusarudzwa. Inotanga pakushandura kuitira kuti webhusaiti yako iite nekukurumidza sezvinobvira. Kurumidza kupinza mazita ekutsvaga mamwe magwara kunzvimbo yako Nzvimbo dzeWP Rocket dzinosanganisira kuisa nokukurumidza, browser uye peji caching, pepa rekuchengetedza zvinyorwa, kushandiswa kwemashoko, multisite kuwirirana, CloudFlare kushamwaridzana, mitauro yakasiyana-siyana, unyanzvi hwekuvandudza uye E-commerce..
Iri plugin re WordPress rinokubatsira kuti ugadzire mafomu akabudirira ari kukukoka, saka tibatsire vanhu kuti vakuudzei kunze kwema email. Icho chikwata uye dheki muvaki. Nokudaro, iwe unodhonza uye unodonha basa rauri kuda, zvichida yemedhi-pasi, uri muforomu. Pre-built form ma templates anowanikwawo. WPForm zvinhu zvinosanganisira kudonha nekudonha muumbi wefomu, kugadzikana kushamwaridzana nemafambisi, mafirimu ma templates, zviziviso zvenguva pfupi, kutarisira kupinda, kushandiswa kwe spam, data ye geolocation nezvimwe zvakasiyana-siyana zvakadai sePaypal Add-on, mupepeti wekuwedzera, wapier add-on, sachigaro Wedzera-pane pakati pevamwe.
WPBakery inoyevedza peji inovaka iyo inobatanidza uye inotsigira mamwe WordPress plugins. Nezwi iri rePad WordPress, unogona kukurumidza kuumba chero sarudzo yaunoda pawebsite yako nekubatsira kudhonza nekudonha muvaki. Iyo inowirirana naWoommerce uye zvikuru SEO friendly saka inogona kushandiswa kune dzakasiyana-siyana zvemasayiti. Zviratidzo zvayo ndeye-code-oriented code, multilingual ready, frontend uye backend mhariri, tsika yemasitoresi ekusimbisa, mafikirwo emifananidzo pakati pevamwe.